Mofon’aina – Alatsinainy 08 Jona 2015 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – Alatsinainy 08 Jona 2015
13 Iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana? Aoka hasehony amin’ny fitondran-tena tsara ny asany amin’ ny fahalemem-panahin’ ny fahendrena.14 Fa raha misy fialonana mirehitra [Gr. mangidy] sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mirehareha na mandainga manohitra ny marina.15 Izany fahendrena izany dia tsy ny avy any ambony, fa araka ny etỳ an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny an’ ny demonia.16 Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mbamin’ izay asa ratsy rehetra.17 Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindrampo sy be voka-tsoa, tsy miahanahana [Na: miangatra] na mihatsaravelatsihy.18 Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin’ ny fihavanana ho an’ izay mampandroso ny fihavanana [Na: Izay mampandroso ny fihavanana no mamafy ny vokatry ny fahamarinana amin’ ny fihavanana] .
AVY AMIN’ANDRIAMANITRA NY FAHENDRENA SY NY FAHALALANA.
I Jakoba dia mampahatsiahy fa ny finoana dia tsy azo sarahina amin’ny asa, ary ny asa dia vokatry ny fahendrena, dia ny fahendrena izay manana ny toetrany :
1-Ny fahendrena sy ny fahalalana dia tsy afa-misaraka (and.13)
Tsy afa-misaraka ny fahendrena sy ny fahalalana mba hahazoany manatanteraka asa tsara. Ny fahendrena sy ny fahalalana dia tsy afa-misaraka amin’ny asa tsara (and.13) Tsy misy izay ilana ny fahendrena amam-pahalalana raha tsy ampiasaina hanatanterahana asa satria toy ny tsy misy ny zavatra iray ananana nefa tsy hita akory ny fisiany.
2-Ny fahendrena sy ny fahalalana dia tsy afa-misaraka amin’ny fitiavana (and.14)
Mampiavaka ny fahendrena amam-pahalalana avy amin’Andriamanitra dia ny fahitana ny anjara toeran’ny fitiavana eo amin’izany.
3-Ny fahendrena sy ny fahalalana dia tsy afa-misaraka amin’Andriamanitra manome azy (and. 15).
Ny vokatry ny asa ataon’ny olona no mampisongadina ny fahendrena amam-pahalalana avy amin’Andriamanitra na tsia. Amin’izany, Andriamanitra dia fantatra mandrakariva eo amin’ny vokatr’izay atao.
Tanisao ireo toetran’Andriamanitra, araka ny and. 17 eto.
Teny mivohitra: Fahalalana, Fahendrena, Fitiavana